VaMugabe Voita Zano Ndega Pakudoma Vatongi
Mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, neChina vakaitazve rwendo rwembwa vakatoresa mhiko vatongi vashanu vasina kana kumboruma nzeve mutungamiri wehururumende, VaMorgan Tsvangirai, sezvinodiwa nechibvumirano cheGlobal Political Agreement.
VaMugabe vadoma Amai Rita Makarau kuti vaende kuSupreme Court. Vatoresawo mhiko VaGeorge Chiweshe kuti vaite mutongi mukuru wedare reHigh Court.
VaChiweshe ndivo vaitungamira Zimbabwe Electoral Commission pasarudzo dzakaita mutauro dzemuna 2008. Vamwe vadomwa kuva vatongi vedare reHigh Court ndiVa Nicholas Manthonsi, VaAndrew Mutema, naVaGarainesu Mawadze.
Asi veZanu-PF vaudza Studio 7 kuti pasi pebumbiro remitemo, VaMugabe vanokwanisa kutoresa mhiko kana vataura neJudicial Services Commission chete pasina VaTsvangirai kana mumwe wevatevedzeri wavo, VaArthur Mutambara.
Nyaya yekuita zano ndega pakudoma vanhu ndiyo yakapa kuti VaMugabe vadome muchuchusi mukuru wehurumende, uye gavhuna webhanga guru renyika, izvo zviri kupa mutauro wakanyanya muhurumende yemubatanidzwa. VaRugare Gumbo ndivo mutauriri weZanu-PF. VaGumbo vanoti VaMugabe ndivo chete vanokwnisa kudoma vatongi pasina zvekusuma VaTsvangirai..
Asi mutauriri weMDC, VaNleson Chamisa, vanoti zviri kuitwa naVaMugabe zvichakonzera mutauro wakanyanya muhurumende yemubatanidzwa.